Madaxwaynihii Hore Ee ka Haligmay Maraykanka George H. W. Bush Oo Maanta Aas Qaran loo Sameeyay. – Heemaal News Network
Madaxweynihi 41-aad ee Mareykanka George Herbert Walker Bush ayaa maanta lagu wadaa in lagu aaso magaalada uu ku dhashay ee Houston ee gobolka Texas.
Diyaarad gaar ah ayaa xalay meydka George H. W. Bush geysay magaalada Houston, kaddib marki xus qaran loogu sameeyay shalay kaniisadda National Cathedral ee magaaladan Washington.
Madaxweynayaasha nool ee Mareykanka, saraakiil milatari iyo dad magac ku leh Mareykanka iyo dunida ayaa ka qeybgalay tacsida qaran ee shalay loo sameeyay Bush.
Tacsi gaar ah oo ay ka qeybgali doonaan qoyskiisa ayaa sidoo kale madaxweyne Bush loogu sameyn doonaa magaaladi uu kasoo jeeday ee Houston.
Tareen si gaar ah loogu sameeyay Gorgre W.H. Bush ayaa geyn doono qabriga lagu aasi doono oo ku dhex yaalla maktabadda uu ku leeyahay jaamacadda A&M University.
Waxaa lagu dhinac duugi doonaa xaaskiisa Barbara oo iyaduna geeriyootay horraanti sannadkaan, iyo gabadhiisa Robin oo geeriyootay iyada oo aad u da’yar.
Shirkadda Microsoft ayaa waxay sheegtay weerar dhinaca Interneetka ah oo Mareykanka lala damacsanaa iney fashilisay. Shirkaddu waxay sheegtay iney dad ka soo jeeda Ruushka ay damceen iney jabiyaan computarro ay leeyihiin hay’ado siyaasadeed, oo ay […]
Trump Oo Sheegay Inuu Shaqa Aqalka Cad ka Eryayo Garyaqaankiisa Don Mc Gahn.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu Aqalka Cad ka tagayo garyaqaankiisa Don McGahn bilaha soo socda. Madaxnaha ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in go’aankan uu ka dambeeyay […]
Bashiir Sheekh Cumar Good ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xafiiska Wakiilka maamulka Soomaaliland u jooga dalka Mareykanka ,xilkaasoo uu madaxwayne Biixi U magacaabay Dhawaan. Bashiir Good oo kamid ahaa la taliyaasha Ra’isul Wasaaraha […]